युट्यूब पुस्तकालय केको लागि राम्रो छ? ➡️ ➡️ अनुयायीहरू ➡️ ➡️
12 सक्छ, 20210टिप्पणी 486
के तपाइँ YouTube बाट अधिक लाभ लिन चाहानुहुन्छ? त्यसोभए तपाईंले यो लोकप्रिय स्ट्रिमि video भिडियो प्लेटफर्म समावेश गर्ने "लाइब्रेरी" उपकरण कसरी प्रयोग गर्ने सिक्नुपर्दछ। यदि तपाईं यो समारोह के हो र यो के हो भनेर जान्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने, हामीसँग बस्नुहोस्।
यूट्यूब पुस्तकालय मध्ये एक हो उत्तम उपकरणहरू जुन अनुप्रयोगले हामीलाई प्रस्ताव गर्न सक्छ। यस मार्फत हामीसँग विभिन्न प्रकारका सामग्रीहरू पहुँच गर्ने विकल्प छ, हाम्रो प्लेब्याक ईतिहास, सुरक्षित भिडियोहरू र सक्रिय पुन: उत्पादनहरूको सूची सहित।
यस उपकरणको बारेमा धेरै कुरा भनिएको छ तर यसमा हुनसक्ने स्कोपलाई थोरैलाई थाहा छ यदि सहि तरिकाले प्रयोग गरिएको छ भने। सामान्यतया यो एउटा फंक्शन हो जसमा हामी प्लेटफर्मको बिच प्रत्येक सामग्रीलाई राम्रोसँग संगठित गर्न सक्छौं।
यूट्यूब पुस्तकालयले हामीलाई अनुमति दिन्छ हामीले प्लेटफर्मबाट हेरेका सबै भिडियोहरूको पूर्ण रेकर्ड पहुँच गर्नुहोस्। यसले हामीलाई अनुप्रयोगमा अपलोड गरिएका हाम्रा भिडियोहरू र हामी सक्रिय भएका प्लेसूचीहरू हेर्न विकल्प पनि दिन्छ।
कसरी YouTube पुस्तकालय पहुँच गर्ने
हाम्रो यूट्यूब लाइब्रेरीको पहुँच एकदम सरल र छिटो छ। हामी यसलाई डेस्कटप संस्करणबाट वा हाम्रो मोबाइल उपकरणहरूमा स्थापित अनुप्रयोगबाट पनि गर्न सक्दछौं।
यदि तपाईं आफ्नो पुस्तकालय प्रविष्ट गर्न चाहानुहुन्छ भने पीसी बाट तपाईंले यी व्यावहारिक चरणहरू अनुसरण गर्नुपर्छ:
पहुँच तपाईको खातामा
क्लिक गर्नुहोस् तीन तेर्सो पट्टि (स्क्रीनको माथिल्लो बायाँ कुना) माथि
हामी लाइब्रेरी बाट सीधा पहुँच गर्न सक्दछौं बाट मोबाइल अनुप्रयोग YouTube बाट त्यसो गर्न अझ सजिलो छ:
तपाईंको मोबाइलमा युट्यूब अनुप्रयोग खोल्नुहोस्
स्क्रिनको तल तपाईंले धेरै पाउनुहुनेछ विकल्पहरू
थिच्नुस "Biblioteca"र तयार छ
यूट्यूब पुस्तकालय सेक्सन
हाम्रो युट्यूब पुस्तकालय प्रविष्ट गरे पछि हामी धेरै धेरै रोचक उपकरणहरू खोज्न जाँदैछौं। यहाँ केहि मुख्य सेक्सनहरू छन् जुन यो विकल्पले समावेश गर्दछ:
ईतिहास: यहाँ तपाईं पुन: उत्पादनको पूर्ण ईतिहास पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईंले हालसालै हेर्नुभएका सबै भिडियोहरू कालक्रम क्रममा देखा पर्नेछ।
पछि हेर्नुहोस्: तपाईंले पछि हेर्नको लागि बचत गर्न निर्णय गर्नु भएको भिडियोहरू यस सेक्सनमा देखा पर्नेछ।
प्लेलिस्टहरू: तपाईं प्लेटफर्म भित्र सिर्जना गरेका सबै प्लेसूचीहरू फेला पार्न सक्नुहुनेछ।
खरीदारी कार्ट: यदि तपाईंले सामग्री खरीद गर्नुभयो भने, तपाईं तिनीहरूलाई यो फोल्डर मार्फत पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ।
भिडियोहरू मलाई मनपर्दछ: यदि तपाईंले एक YouTube भिडियो "मनपराउनु भयो" भने यो सूचीमा देखा पर्नेछ।
YouTube पुस्तकालय प्रयोगको फाइदाहरू
युट्यूब पुस्तकालय क्यान प्रयोग गर्नुहोस् हामीलाई धेरै सुविधाहरू लिन मद्दत गर्नुहोस्, विशेष गरी प्लेटफर्मको भित्र हाम्रो सामग्री व्यवस्थित राख्न।
यस उपकरणले हामीलाई हामीले देखेका सबै सामग्रीहरू अर्डर गर्न अनुमति दिन्छ यूट्यूबमा, ती भिडियोहरू बचत गर्नुहोस् जुन हामी पछि हेर्न चाहन्छौं। हामी हाम्रो प्लेब्याक ईतिहास र च्यानलमा पोष्ट गरिएका भिडियोहरू अझ सजीलो पहुँच गर्न सक्दछौं।
1 यूट्यूब पुस्तकालय के हो?
2 कसरी YouTube पुस्तकालय पहुँच गर्ने
3 यूट्यूब पुस्तकालय सेक्सन
4 YouTube पुस्तकालय प्रयोगको फाइदाहरू